Ao Moldavia, Mitsangana Hanohitra ny Lalàna “Big Brother” Ny Fiarahamonina Sivily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Febroary 2017 6:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, عربي, Español, Italiano, English
Miady hevitra momba ny fanovana ny volavolan-dalàna “Big Brother)” ireo mpanao lalàna Moldavy, lalàna heverin'ny vondrona fiarahamonina sivily sy ny mpiaro ny zon'olombelona fa ahafahana manao fanarahamaso-fitsikilovana sy sivana.
Naneho hevitra momba ny volavolan-dalàna ny European Digital Rights, fikambanana pan-Eoropeana malaza amin'ny fiarovana ny fahalalahana nomerika, nilaza fa tsy tokony hitohy ny dingan'ny mpanao lalàna mikasika ilay volavolan-dalàna “raha tsy misy ny fanadihadiana feno momba ny filàna sy ny fifandanjan’ ity fitsabahana tafahoatra amin'ny zo fototra ity. ary miantoka mba hifanaraka amin'ny fotokevitra iraisampirenena momba ny zon'olombelona ny lalàna.
Raha lany ny volavolan-dalàna Big Brother Moldovia, ho fiafarana ofisialy ny fanantenana hananganana demaokrasia ao amin'ny Repoblika #Moldova izany
Nanazava i Grecu fa tsy mahavita miaro ny olom-pirenena manoloana ny fanarahamaso tafahoatra ny rafi-pitsarana Moldavy, tamin'ny fanononana tahiry ofisialy fa mankasitraka ny 98%-n'ny fangatahan'ny mpampanoa lalàna hitsabaka amin'ny fifandraisana elektronika ny mpitsara.
Nilaza i Nadejda Hriptievschi, talen'ny fandaharan'asa ao amin'ny Foiben'ny Loharanom-baovao momba ny Lalàna avy ao Moldovia (LRCM) fa miahiahy momba ny volavolan-dalàna izy ireo satria ahitana fehezan-dalàna maromaro manome fampidirana fepetra fanarahamaso faobe “tsy azo hamarinina mihitsy” ao. Nanamarika ihany koa izy fa ny fehezan-dalàna mikasika ny fanesorana votoaty manafintohina dia mety hitarika (ara-teorika) any amin'ny fanakatonana ny Facebook, Youtube na Twitter ao amin'ny Repoblikan'i Moldavia na fanakatonana ihany koa ireo “tranonkala manelingelina ny governemanta/andrim-panjakana.”
Niditra tao amin'ny Parlemanta Moldavy tamin'ny Aprily 2016 ny lalàna. Nahemotra ny fandaniana azy rehefa nitaky fanitsiana ny volavolan-dalàna bebe kokoa ny vondrona fiarahamonim-pirenena mba hahatonga azy hifanaraka amin'ny fenitra iraisampirenena. Nahitana fijerena avy amin'ny Vaomieran'i Venizy, sampana fakan-kevitra ao amin'ny Vaomiera Eoropeanina, ahitana ireo manam-pahaizana tsy miankina eo amin'ny sehatry ny lalàm-panorenana, izay manome torohevitra ara-dalam-panorenana ao Eoropa Afovoany sy Atsinanana izany.
Tamin'ny Oktobra 2016, nikarakara tapatapak'ahitra azon'ny daholobe atrehina niarahana tamin'ny depiote ny fikambanana firaisamonim-pirenena voakasika ary nanandra-teny hanoherana ny bodofotsin'ny fanarahamaso faobe.
Tamin'ny volana Novambra, namoaka ireo toro-hevitra mikasika ny Lalàna “Big Brother” ny LRCM, nomanina niaraka tamin'i Bogdan Manolea, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Fikambanana misahana ny Teknolojia sy ny Aterineto (ApTI) ao Romania, mpikambana mpifanolo-bodirindrina avy amin'ny Vondrona Eoropeana. Nanoro-hevitra ny vondrona mba hitsipaka ny fehezan-dalàna mety hitarika any amin'ny fepetra fanarahamaso faobe, ary nidirany lalina ny fanadihadiana ny lalàna izay mametra ny zo fototra, sy manofahofa ny adidy “hampitsahatra“ ny fidirana amin'ny pejin'ny habaka.